गगन थापा पक्षधरले देउवालाई दिए पार्टी छाड्ने देखि कुट्नेसम्मका धम्की ! – Complete Nepali News Portal
गगन थापा पक्षधरले देउवालाई दिए पार्टी छाड्ने देखि कुट्नेसम्मका धम्की !
March 16, 2017	23,300 Views
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निश्चित भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु आफ्नै नेतृत्व बिरुद्ध खरो विरोधमा उत्रिएका छन ।
काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले थापालाई मन्त्रीबाट हटाए कांग्रेस पार्टी छाड्ने चेतावनी मात्र दिएनन् पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई जहाँ भेट्यो त्यही कुट्ने धम्कीसम्म दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा देउवाकाे घाेर विराेध भइरहेकाे छ । केहीले त थापालाई रबीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीमा लाग्न समेत सुझाव दिन भ्याइसकेका छन् ।
यो समाचार हामीले : इमान्दारमिडिया बाट साभार गरेको हो